ATMIS oo la wareegeysa Amniga Madaxweynaha la doorto iyo ciidamo lala rarrayo Afisyoone - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. ATMIS oo la wareegeysa Amniga Madaxweynaha la doorto iyo ciidamo lala rarrayo Afisyoone - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
ATMIS oo la wareegeysa Amniga Madaxweynaha la doorto iyo ciidamo lala rarrayo Afisyoone
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhoweyd soo saaray Qorshaha Amniga Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee la filayo inay dhacdo 15-ka May 2022.
Guddiga ayaa Amniga Doorashada u xilsaaray ciidamda ATMIS, waxaana kaliya gudaha Teendhada loo ogol ahay 22 askari Boolis ah oo aan hubeyneyn, iyadoo Ciidamada dowladda ee deganaa Teendhada Afisyoone laga rarrayo si KMG ah.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha cusub ee la doorto ay isla markiiba amnigiisa la wareegeyso ATMIS, isla markaana loo qaadayo meel amnigeedu sugan yahay.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Tariikh 10/05/2022 Guddoonka Baarlamaanku waxuu soo saarey bayaankan Amni ee Tafaasilshu hoos ku qoran:
F) Afar iyo labaatan (24) Booliis ah oo aan hubaysnayn waxay kala shaqeynayaan ATMIS warunta doorashadda ee Tecndhada Afasiyooni.
J) Dhammaan Xildhibaanada Sharafta leh waxaa laga rajeynayaa in ay gacan siiyaan ciidanka amniga sugaya ee baraha baaritaanka joogo si loo hubiyo amniga ka soo qaybgalayaasha oo dhan.
M) Dhamaan Murashaxiinta, Xildhibaanada iyo martida la martiqaaday baabutooda waxay uga soo tagayaan Dugsiga Tababarka Ganaraal kaahiye ama Barxada Airportka. Intaa ka dib waxaa la marayaa baaritaanka amniga ee albaabka Airportka, dabadeedna waxaa la raacayaa Basaska Booliiska iyo UN oo geynaya Teendhada.
N) Murashaxa ku guuleysta/guulaysata Xafiiska Madaxweynaha waxaa isla markiiba amnigiisa/ amnigeeda la wareegaya ATMIS, waxaana loo qaadayaa meel amnigeedu sugan yahay.
Previous articleMusharixiin Caan ahaa oo ka haray Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya 2022
Next articleQarax ka dhacay Wadadda tagta Garoonka Muqdisho iyo Qasaaraha ka dhashay…